Kiishada Ilaha Qoyska ee Coronavirus (COVID-19) | Boston School Finder
Kiishada Ilaha Qoyska ee Coronavirus (COVID-19)
Aalada Boston School Finder, waxaan aqoonsanahay in aan ku jirno waqti adag ayadoo ay qasab tahay in bulshadeenu raacaan isbadelada adag ee ku yimid qaababkeena caadiga ah ee nolosha anagoo isku dayayna hoos u dhigida faafida cudurka COVID-19, oo ah cudur ka dhasha caabuqa coronavirus. Shaqadeena ayaa mar kasta diirada lagu saaraa xoojinta xogta sida fudud loo fahmi karo ee aan siinayno qoysaska — sidaas ayuuna sii ahaanayaa xataa markaan waajahayno masiibada cudurka saf marka ah ee coronavirus.
Bogga waxaa markii u danbaysay wax laga badalay 12:00 AM bishii Abriil 21, 2020.
COVID- 19 Cusbooneysiin
Taageero Xasaasi ah (cunno, dhaqaale, xanaano caruur, iwm.)
Xogaha Kasoo Kordha Xiritaanka dugsiga iyo Diiwaan galinta Dugsiga
Xogta guud ee ku saabsan cudurka Coronavirus (COVID-19)
Halkaan ayaad ka helaysaa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato cudurka coronavirus (COVID-19) ee soo gaaray Magaalada Boston.
Qoraal BOSCOVID illaa 99-411 si aad uga hesho farriimaha qoraalka ee magaalada oo af Ingiriis ku qoran.
Fariimo qoraalkaan ayaa hadda ku baxaaya lix luuqadood. Si aad fariimahaan ugu hesho luuqado kale, erayga soo socda qoraal ahaan ugu dir 99-411:
Massachusetts Department of Public Health (DPH, Waaxda Caafimaadka Dadwaynaha ee Massachusetts)
Halkaan ayaad ka helaysaa Xog ku saabsan Faafida Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) oo kasoo baxay gobalka Massachusetts.
Qoraal u dir BOSCOVID 888-777 si aad uga hesho farriimaha qoraalka ee gobalka oo af Ingiriis ku qoran.
US.. Centers for Disease Control & Prevention (CDC, Xaruunta Ka hortaga iyo Xakamaynta Cudurka ee Maraykanka)
Halkaan ayaad ka helaysaa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato cudurka Coronavirus (COVID-19) oo soo gaaray wadanka Maraykanka.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad caafimaad:
Haddii aad waajahayso xaalad caafimaad oo degdeg ah, wac 9-1-1.
Wixii la xariira dhammaan walaacyada caafimaadka, wac dhakhtarkaaga. Haddii aad aaminsan tahay inaad qaaday cudurka COVID-19 aadna dareento qandho iyo astaamaha cudurka, sida qufac ama neefta oo ku dhibta, wac dhakhtarkaaga si aad u hesho talo caafimaad.
Haddii aad u baahan tahay cunto:
Dugsiyada Dadweynaha Boston waxay sii wadi doonaan inay siiyaan quraac iyo qado bilaash ah dhammaan carruurta Boston ; umana baahnid inaad ilmo ku dhigatid dugsiyada DDB si aad uhesho cuntooyinkaas. Goobaha waxay furi doonaan Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 : 30 AM ilaa 11 : 30 AM ee iskuulada halkan ku taxan.
Magaalada Boston, iyadoo kaashanaysa Mashruuca Bread, YMCA da Magaalada Boston, Xarumaha Dhallinyarada iyo Qoysaska ee Boston, iyo ururada kale ee bulshada, waxay siin doonaan cunno bilaash ah dhammaan dhallin-yarada iyo carruurta laguna bixin doono meelo kaladuwan iyo waqtiyo kala duwan daafaha magaalada.
Booqo bogga Qariirada Goobaha Cuntada ay ku bixiso Magaalada Boston si aad xog dheeraad ah u hesho.
Hadaad ubaahantahay ilo dhaqaale oo dheeri ah:
Fadlan kala xiriir Khadka Tooska ah ee Keydinta Cuntada Raashinka ee Mashruuca ( 800 ) 645 - 8333 .
Hadaad ubaahantahay kaalmo lacageed:
Haddii aad ugu baahan tahay taageero maaliyadeed Coronavirus (COVID- 19 ) sababtuna tahay iskuullada oo la xiro ama mushaharka lumay, Union Capital Boston ayaa bixiya taageero maaliyadeed qaab kaararka hadiyadda UCB Visa. Union Capital Boston waxay dalban doontaa kaararka hadiyadeed ee Visa Jimcaha, Maarso 20 waxayna qaadan doontaa 7 - 10 maalmood inay yimaadaan. Waxay u qaybin doonaan qadarka kaar walba si siman iyadoo lagu saleynayo tirada lacagta la soo qaaday.
Si aad u codsato kaarka hadiyadda fadlan buuxi foomkan , oo laga heli karo Ingiriis iyo Isbaanish.
Si aad ugu tabarucdo Sanduuqa Taageerada Maaliyadeed ee 'UCB COVID- 19 , guji halkan .
Haddii aad u baahan tahay daryeelka carruurta:
Gudoomiyaha gobalka Massachusetts ayaa amray in DHAMMAAN xarunaha daryeelka carruurta ee xarunta rasmiga leh iyo barnaamijyada daryeelka ilmaha ee qoysaska in hadda xiro ilaa Juun 29, 2020.
Barnaamijyada Degdega ah ee Daryeelka Carruurta ee Lasoo reebay ayaa la heli karaa, laakiin Fadlan akhri tilmaamaha hoose:
Barnaamijyada Xannaanada Ilmaha ee Ka-dhaafka ah: Ha la xiriirin barnaamijka daryeelka ilmaha ee degdegga ah inaad u baahan tahay xaalad deg-deg ah, kalkaalin, daryeel-la-imaad. Mudnaanta waa in la siiyaa dadka ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn shaqaalaha daryeelka caafimaadka, shaqaalaha muhiimka ah ee gobolka iyo shaqaalaha adeegga aadanaha, COVID-19 shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha dukaannada raashinka, shaqaalaha gurmadka degdegga ah, xoojinta sharciga, gaadiidka iyo kaabayaasha, shaqaalaha fayadhowrka, DCF- Qoysaska ku lugta leh, iyo qoysaska ku nool hoyga.
Si loo yareeyo faafitaanka coronavirus, qoysaska oo dhan waa inay carruurta ka fogeeyaan goobaha daryeelka kooxda ilaa inta ugu badan ee suuragalka ah. Barnaamijyada Xannaanada Ilmaha ee degdegga ahi waa goorta dhammaan goobaha kale ee daryeelka-kooxdu ka dhammaadeen ay qoysasku haystaan ikhtiyaar kale.
Waxaad ka heli kartaa liistada ee bixiyeyaasha daryeelka degdegga ah ee daryeelka degdegga ah halkan. (Fadlan la soco: liistadani waxay ku saabsan tahay gobolka Massachusetts oo dhan, maahan oo keliya Boston.) Liiskani wuxuu sii socon doonaa cusboonaysiinta maadaama barnaamijyo badan la oggolaaday. Waalidku waxay mas'uul ka noqon doonaan inay gaaraan barnaamijyada shaqsiga ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo Massachusetts Department of Education Hore iyo Emergency Care hanuun bogga .
Haddii aad lumisay shaqadaada:
Haddii aadan u qalmin faa'iidooyinka shaqo la'aanta Massachusetts, waxaad uqalmi kartaa Gargaarka Shaqo La'aanta Musiibada ee iyadoo loo marayo dowladda federaalka. Fadlan booqo boggooda internetka wixii macluumaad dheeri ah.
Haddii aad u baahan tahay gaadiid:
Waxaa jiray carqaladeyn dhanka adeegga ah oo ay ugu wacan tahay COVID-19 dhanka gaadiidka dadweynaha ee Magaalada Boston. Booqo websaydha MBTA si u hesho digniinta ugu dambeysa ee adeegga iyo cusboonaysiinta.
Haddii aad tahay so galooti ama aadan haysan sharciga wadanka:
Magaalada Boston waxay leedahay Tusmada Ilaha COVID-19 ee Dadka Soo Galootiga ah ee Ku dhaqan Boston ood ka helayso halkaan.